Ogaqele esokuhola i-ANC uthi imfundo yamahhala yinto engenzeka eMzansi. – Vibe News Network
Loyo ogaqele isikhundla sokuhola i-African National Congress (ANC) obuye abe yilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC uLindiwe Sisulu uthi imfundo yamahha yinto engenzeka eNingizimu Afrika inqobo nje uma kungaqedwa ukwebiwa kwemali yoMbuso.
USisulu usho kanje ngesikhathi ethula inkulumo yakhe eNyuvesi yaseKapa ngelanga langoLwesine ngaphansi komkhankaso wemfundo yamahhala. Lomkhankaso wemfundo yamahhala uyingxenye yemizamo yethimba loNgqongqoshe beholwa isikhwama esisiza abafunda ngemali yokufunda (NSFAS) ngokuxhaswa kwabafundi abangu-500 000 abadla imbuya ngothi, nalabo abangenawo kahle amandla okukhokhela imfundo emazingeni aphakeme.
USisulu uthi kenezizumbulo ezisetshenziswa budedengu kuleli. Lelithimba elasungulwa liveze ukuthi imfundo yamahhala ingadla imali elinganiselwa ku-R42 Billion wamarandi kati ngesikhathi kubalwa imali eyebiwe kulemnyaka emithathu eyendlule kutholakale ukuthi yimali elinganiselwa ku-R100 Billion wamarandi.
Previous Previous post: I-ANC KZN ikuphikile ukusebenzisa izinsiza zoMbuso ukulwa izimpi zepolitiki
Next Next post: Abasebenzi bezingcingo 10111 bazobuyela emsebenzin ngoMsombuluko.